Waxaa soo gaba gaboobay weerar saacada badan qaatay oo ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda wadanka Afghanistan.
Ugu yaraan 7 ayaa ku dhimatay weerar aad u xooggan oo dagaalyahanno katirsan Xarakada Taliban ay ka fuliyeen Hoteel ammaankiisa si aad ah loo ilaaliyo.
Weerarka oo qaatay 12 saacadood oo xiriir ah ayaa ka dhacay Hotelka lagu magacaabo Intercontinental, dagaalyahannada weerarka Naf hurnimo fuliyay ayaa la wareegay dabaqyada sare ee Hoteelka waxayna dagaal adag lagaleen ciidamo isugu jira Mareykan iyo kuwa dowladda.
Xarakada islaamiga Taliban oo sheegatay Mas'uuliyadda weerarka ayaa faah faahin ka bixisay sababta ay weerarka ufulisay iyo khasaaraha ka dhashay, Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid oo afhayeenka Taliban ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalyahanadoodu ay laayeen dad reergalbeed ah.
Hoteelka Intercontinental oo ay leedahay shirkad Yahuud ah waxaa degan mas'uuliyiinta ugu sarraysa taliska NATO iyo hay'adaha Q.Midoobe waana hotel amnigiisa si aad ah loo adkeeyo.
Sanaddii 2011 ayuu Hotelkan weerar aad u xooggan kala kulmay Taliban waana Hotel caan ku ah marti gelinta xafladaha reergalbeedka iyo munaasabadaha ay dhigtaan madaxda xukuumadda Dabadhilifka Afghanistan.